Inona no jerena ao an-tanànan'i Écija | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | España, General, Inona no ho hita
Écija no anaran'ny tanàna sy tanàna, any amin'ny faritanin'i Seville, any Andalusia. Voalaza matetika momba an'io toerana io fa a tanànan'ny tranombakoka ary tsy isalasalana fa mila mandeha mangingina ianao hankafy ny toerana tsirairay. Manomboka amin'ny patio Andalosiana mahazatra mankany amin'ny facade sy fiangonana. Toerana iray na dia tsy dia malaza loatra aza dia gaga hatrany ireo mpitsidika azy.
Discover inona no ho hita any Écija raha hanao fialantsasatra kely ianao amin'ity vanim-potoana ity. Fotoana izao hanombohana mieritreritra ireo dia kely hataonao amin'ity taona ity, izay ho feno tanjona vaovao ho hita ary mety ho anisan'ireny i Écija. Ankoatr'izay dia tanàna tsy ampoizina amin'izay rehetra atolotray izy.
1 Mizotra mamakivaky ireo tilikambo
2 Ny tranon'ny fikambanana landy
3 Ny tsena sy ny tsenan-tsakafo
4 Tranombakoka manan-tantara
6 Lapan'ny Marquis of Peñaflor
7 Fiangonan'i San Juan
Mizotra mamakivaky ireo tilikambo
La Ny tanàna Écija dia fantatra ihany koa amin'ny tanànan'ny tilikambosatria manana tilikambo lakolosy sy cattails maro izy. Raha atambatra dia manana tilikambo 11 sy cattails 13 izy. Ny avo indrindra dia ny an'ny San Gil, izay 52 metatra ny haavony. Ny 8 desambra no fetin'ny fananahana tsy misy kilema, ka amin'ny mitataovovonana dia mitete daholo ny lakolosy ao an-tanàna. Ny fikarohana ny tsirairay amin'ireo tilikambo ireo dia mety ho fomba tsara hijerena ny tanàna sy hahitana ny tantarany.
Ny tranon'ny fikambanana landy
Ity dia iray amin'ny an'ny tranobe tsy tokony ho hita ao an-tanànan'i Écija. Any akaikin'ny Plaza de España no misy azy ary io no toerana nisy ilay guilda landy. Nohavaozina be ny ao anatiny fa ny zavatra tena mahaliana dia hita amin'ny endrika tarehiny, miaraka amin'ny haingon-trano sy ny lavarangana tsara tarehy.
Ny tsena sy ny tsenan-tsakafo
Na dia tsy toerana mahaliana manokana amin'ny lafiny maritrano aza ny tsenan'ny tanàna, ny tena izy dia toerana iray izay matetika mitsidika noho ny antony maro samihafa. Amin'ity tsena ity dia azonao atao mitadiava vokatra vaovao tsara indrindra hahagaga ny vavantsika. Ary matetika koa izy io dia iray amin'ireo toerana tena izy amin'ny tanàna, izay ahitantsika ny tena tontolo iainana sy ny mponina ao aminy.
El Museum Museum of Benamejí no misy ny Museum Museum izay novidin'ny filankevitry ny tanàna tamin'ny faran'ny taonjato faha-1996. Hatramin'ny taona XNUMX dia nitoetra ny rezimanta mpitaingin-tsoavaly miaramila, saingy nanomboka io fotoana io dia tranom-bakoka. Ho fanampin'izany, ny sasany amin'ireo efitranony dia ampiasaina hanaovana hetsika izay mety hahaliana. Ity faritra ity dia manana tantara maro sy sisa tavela amin'ny arkeolojika, noho izany dia asa lehibe ny fanangonana sombin-javatra izay niaraka tamin'ny fotoana ary ny spolum dia niafara tamin'ny tanana hafa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny sisan'ny Romana, satria ity tanàna ity dia teboka iray lehibe ho an'ity sivilizasiôna ity. Misongadina ny sombin'ilay Amanzona maratra. Ity sary sokitra ity dia iray amin'ireo telo eto amin'izao tontolo izao ary ilay iray izay azo tehirizina tsara indrindra. Ankoatr'izay, ny endriny tany am-boalohany dia polychrome, na dia marbra miboridana izao aza no hita. Ny maha-zava-dehibe ny taolam-paty dia efa an-dàlana ny asa amin'ny valan-javaboary arkeolojika ho an'ny tanàna.
Ity kianja ity dia fantatra amin'ny tanàna hoe Hall. Io no kianja lehibe sy toerana azontsika apetraka ho fiandohana hijerena ny tanàna. Tao amin'ity toerana ity no nahitana fikarohana arkeolojika lehibe, satria izy ireo dia nametraka azy ireo tany ambanin'ny tany ary niseho izy ireo rehefa nokasaina ny toerana fitobiana ambanin'ny tany tao amin'ilay faritra. Ho fanampin'ny taolam-paty arkeolojika dia nisy fasana silamo hita. Ity no faritra ahafahantsika miala sasatra amin'ny fisotroana rehefa hitantsika ny fandehan'ireo tranonkala arkeolojika ireo.
Lapan'ny Marquis of Peñaflor
Ity no voalohany Lapan'ny fomba Baroque izay nitsangana tao an-tanàna. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe lavarangana lava sy daty tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia voaro amin'ny maha-fananana tombotsoan'ny kolontsaina azy nefa amin'izao fotoana izao dia angatahina ihany koa ny filankevitry ny tanàna handray ny fanarenana azy, satria ao anaty fahasimbana iray izany. Na izany aza, dia mbola lapa tsara tarehy izy miaraka amin'ny façade mahavariana izay miresaka momba ny fomba Baroque iray be marika.
Fiangonan'i San Juan
Mendrika tsidihina ity fiangonana ity satria manana toerana mahaliana maromaro. Ny iray amin'izy ireo dia ny fiangonana rava taloha dia ny tokotanin'ny fidirana amin'ilay fiangonana vaovao. ny etsy ambony dia saika noravan'ny horohorontany tany Lisbonne ary hitanao tsara ireo taolam-paty sy ny endriny ireo. Ity patio ity dia toerana manan-tantara izay ampiasaina amin'ny hetsika isan-karazany ao an-tanàna. Misongadina ihany koa ny tilikambon'ity fiangonana ity, miaraka amin'ny haingon-trano baroque, sary hosodoko amin'ny loko mena ary fomba iray manintona ny saina avy eo amin'ny tokotanin'ny fidirana. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mianika azy hahita ny tanàna avy any ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita any Écija